ရွှေပါးစပ်ငွေပါးစပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ရွှေပါးစပ်ငွေပါးစပ်	12
Posted by aye.kk on Aug 17, 2015 in My Dear Diary | 12 comments
အကျိုးရှိသောစကါးကိုသာလျှင် ကြားသိရမည်မှာ အမှန်ပင်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အမအေးရေ အများအားဖြင့်တော့
ပေါက်ပန်းဈေး ပါးစပ်တွေဘဲ အတွေ့များနေပါတယ်
naywoon ni says: ခုလတ်​တစ်​​လောမှာ​တော့ မဖြစ်​နိုင်​​သေးဘူးနဲ့ တူတယ်​ဗျာ ​နောက်​​ခြောက်​လ​လောက်​ကြာရင်​​တော့ ​မျှော်​လင့်​ရတာပဲ။ အဲ့ဒိ​တော့မှပဲ ​ရွှေပါးစပ်​ ​ငွေပါးစပ်​ ​ရွှေနား ​ငွေနား ဖြစ်​လာတနာ​ကောင်းရဲ့ လို့ ​မျှော်​လင့်​ရင်း NLD ကိုမဲ​ပေးပါ့မယ်​ ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: တစ်ချို့ ပါးစပ်တွေကကျ
ကိုယ့်ကောင်းကြောင်း ပဲ ပြောတတ်ကြတာ ထင်ရဲ့ …!!
အောင် မိုးသူ says: အစားကောင်း အသောက်ကောင်းကြိုက်တဲ့ ကျတော့်ပါးစပ် ဟိဟိ။
Mike says: .ရွှေပါးစပ် ငွေပါးစပ်ရယ်လို့
.အနေမတတ်အောင်ပြောလာကြတော့……. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2399
aye.kk says: comment ပေးသူအားလုံး
စကါး၂-မျိုးလုံး ကျိုးရှိဟုတ်မှန် ဖြစ်ဘို့လိုအပ်လှပါတယ်။။
Ma Ma says: ဘုရားဂုဏ်တော်တွေထဲက ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံးတစ်ပါးပါးကို အမြဲတမ်းပွားဖို့ပွားပြောတော့ စဉ်းစားလိုက်တာ သုဂတော ဂုဏ်တော်ကို သွားတွေ့တယ်။
ကောင်းသောစကားကို ဆိုရင် နောက်ထပ်က ကောင်းဖို့တွေချည်းဖြစ်လာနိုင်တာပေ့ါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2399
ဇဗ္ဗူ ကျွန်း နိမိတ်ထွန်းဆိုသလို
ကေါင်းသောစကါး များများပြောကြားကြတာ များလာရင်
ကေါင်းတာတွေဧကန် အမှန် ဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတာ ကျွန်မအနေဖြင့်ယုံကြည်ပါတယ်။
မြစပဲရိုး says: အစ်မအေး ရေ တန်ဖိုးရှိ အကျိုးရှိ တဲ့ ရွှေစကား လေး တွေ ကို လိုက်နာနိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး သတိလေး ကပ်နေကြည့်ပါ့မယ်။
. ကျေးဇူးပါ။ :-))
Alinsett @ Maung Thura says: ပါးစပ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် သတိရမိတဲ့ စကားက….
”သုံးဆယ့်နှစ်ချောင်းရှိတဲ့ သွားတွေက တည်ငြိမ်သလောက်…
တစ်ချောင်းထဲရှိတဲ့ လျှာက အတော် ဂယက်ထတယ်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ စကားပုံလေးကို